'रिल' र 'रियल लाइफ'मा अन्तर : यी हुन् सेलिब्रेटीका पीडा
‘रिल’ र ‘रियल लाइफ’मा अन्तर : यी हुन् सेलिब्रेटीका पीडा
२२ मंसिर २०७५, शनिबार ०८:२९
‘मेरो कुरा कसैले बुझ्ने प्रयत्न नै गर्दैन । उनीहरूलाई लाग्छ, मेरो अनेकौँ पुरुषहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध छ । घरमा शंकाको नजरले हेर्छन् । सहकर्मी पनि ताक परे तिवारी नत्र गोतामे छन् । उनीहरू पनि मेरो “महिलापन”को फाइदा नै उठाउन खोज्दछन् । आफुलाई मन पर्ने र जानेको काम यही हो । रातविरात सुटिंग हुन्छ । जानु नै पर्‍यो । काम गर्नुनै पर्‍यो । परिवारबाट कसैलाई सँगै राखौँ भने कहीं निर्माताले खर्च दिँदैनन्, कहीँ आफन्त (लोग्ने, आमा) सँगै जान चाहन्नन् । त्यसमा पनि “फ्यान”हरूले समेत “नराम्रो” कमेन्ट गर्छन् । सामाजले चिन्छ तर परिवारले इज्जत गर्दैन । आजभोली एक्लो भएको छु । समय मिल्दा साथ रुन मन लाग्छ, अनि रून्छु । मेरो मनको कुरा कोसँग भनुँ ? म आफै भित्र निखी सकें । म बाँच्न चाहन्छु’, २८ वर्षीय विवाहित सेलिब्रेटीले आफ्नो मनको कुरा पोखिन् ।
उनी नेपालमा नाम चलेकी हिरोइन हुन् । उनीसँग गाडी, घर, आफुलाई खर्च गर्न पुग्ने पैसा छ । उनले गहभरी आँसु काडेर मसँग भनिन् “हरेक पल फ्यानहरूले उनको चासो राख्छन् । उनि भन्छिन्, ‘तर श्रीमानले भने कुरै बुझ्दैन । एकै पेसामा लागेको र चिनेजानेको भनेर प्रेम विवाह त गरियो । तर विवाहपछि सबै थोक बदलिएको छ । हामी वीच एकआपसमा अविश्वास, घृणा तथा देखेको नदेखैं गर्ने प्रवृति बढेको छ । हामी पतिपत्नी भएर पनि पतिपत्नी होइन प्रतिद्वन्दीको जीवन बाँचिरहेका छौँ । केवल “फ्यानहरु”मा हाम्रो क्रेज कम नहोस् भनेर सँगै हिड्छौ, मुस्कुराउँछौं । मेरो जीवन नर्क छ । जीवन खानु न ओकल्नु भएको छ’ ।
महँगो ठाउँमा ठूलो घर छ, गाडी छ, नोकर चाकर छन् । राम्रो जागिर छ । चालीसौं वसन्त पार गर्दै गरेका तिनले आँखाबाट आशु बगाउन थाले, ‘उनी सामाजिक कार्यकर्ता हुन् । देश-विदेश जान्छिन् । राज्यका सबैठाउँमा उनको पहुँच छ । सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा परम्परागत पारिवारिक मान्यताप्रति उनको कुनै सम्मान छैन । उनको मन, मस्तिष्कमा “पुरुष विभेद” हो भन्ने भरिएको छ । उनी अरूका लागि आदर्श होलिन् तर म र यी छोराछोरीका लागि विष नै हुन् । उनी सँधै गुनासोमात्र गर्छिन् । कुनै पनि कुरामा उनी खुसी देखिन्न् । मेरो आवश्यकता केवल बालबालिका हुर्काउन र उनको शारीरिक भोक मेटाउने मात्र हो । उनकै लागि मैले आफ्नो युएनको जागिर छोडें तर उनीले मलाई बुझिनन् । केही बोल्यो वा संवाद गर्न खोज्यो भने “उत्पीडनमा फसाईदिने धम्कि” आउँछ । यी बालबालिका र परिवारको इज्जतको लागि सबै सहँदै छु । अब साँच्चिकै भन्ने हो भने जिउने रहर नै सकिएको छ’ ।
विगत सम्झँदै उनले थपे, ‘मैले नियमित रूपमा उनले लेखेका लेखहरू, किताबहरू किनेर पढ्थें । मैले सँधै उनलाई आफ्नो आदर्शको रूपमा कल्पना गर्थें । एउटा कार्यक्रममा भेट भयो । माया बस्यो र विवाहपनि भयो । तर विवाह गरेपछि मात्र थाहा भयो, उ निकै अभिमानी, अर्काको कदर नगर्ने, धेरैसँग शारीरिक सम्वन्ध रूचाउने र कसैको पनि पर्वाह नगर्ने मान्छे रहेछ । विवाह गर्ने निर्णय मेरो थियो । त्यतिविध्न राम्रो साहित्य सृजना गर्ने मान्छे यतिबिध्न निष्ठुरी हुन्छ भनेर मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिन । म उसको लागि केवल यौनसुख दिने भाँडो हुँ । उसको प्रसिद्धि नै मेरो लागि घाँटीको पासो बनेका छन् । यो मान्छेसँग न केटाकेटी सुख पाए, न मैले सुख पाएँ, न उसका आमावुवाले नै’ । उनी रोएको देखेर मैले पनि आफ्ना आँशु थाम्न सकिन ।
मसँग भेटेका केही सेलिब्रेटी र तिनका आफन्तको यो अनुभव हो । यस्ता सेलिब्रेटीहरूमा नायक-नायिका, लेखक, चिकित्सक, वकिल र खेलाडीहरू छन् । तर यिनको संसार हामीले सोचे र विचारेझैँ सरल छैन । एउटा विषयमा योग्यता प्राप्त गरेर सेलिब्रेटी बन्नु राम्रो कुरा हो । विश्वका मान्छेका बीचमा चिनिनु राम्रो कुरा हो । आफ्नो परिवार, समाज र देशले तपाईंलाई पछ्याउनु धेरै राम्रो कुरा हो । धन-सम्पत्ति कमाउनु, हर-हमेशा चर्चामा रहनु र धेरैले चाहेको “व्यक्ति”मध्ये पर्नु मनासिव नै हो । तर मसँग सहयोगका लागि आउनेहरूमा प्रसिद्द डक्टर, अभिनेता, राजनैतिक व्यक्तित्व तथा तिनका आफन्त थिए र समस्याहरूको किसिम र ओरिजिन पनि फरक थियो ।
जो-जस्तो पोजिसनमा होस्, मान्छे आखिरमा मान्छे नै हो । भोक-तीर्खा, काम-क्रोध, सुखदुख, घृणा-माया, ममता, स्नेह, पीडा, अहङ्कार, स्वाभिमान, आकर्षण, रुने-हाँस्ने इच्छा, निराशा, आशा, महत्वआदिमा हुन्छ । बिल गेट्सले सुनको भात खान मिल्दैन । हिराले किनेर शरीरको सानो अंग पाइन्न । हरेक व्यक्ति आफैमा पूर्ण, अपूर्ण र सम्पूर्ण हुन्छ । आहार, निद्रा, डर (संवेग) र यौनचाहना हरेक मान्छेमा हुन्छ । अनि, सेलिब्रेटीलाई यो वाहेक बुझ्नु अनुचित हो । “सेलिब्रेटी” एउटा एस्तो पोजिसन हो जहाँ उभिने व्यक्तिले हरेक अवस्थामा अर्कोको लागि आफ्नो सुख र खुसी त्याग्नुपर्ने हुनसक्छ । सेलेब्रेटी स्वयं र तिनका आफन्तले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
उपरोक्त मान्छेहरूलाई भेटेपछि एउटा प्राकृतिक मान्छेको रूपमा मलाई लाग्यो – अहंकार, व्यस्तता तथा गलत-सङ्गतले गर्दा “सेलिब्रेटी”हरू मानसिक रूपमा सँधै पीडित रहने मध्येका प्राणी हुन् । सबै थोक हुन्छ तर उनीहरु मध्ये धेरैजसोको पारिवारिक जीवन हुँदैन । सेलिब्रेटीका धेरै फ्यान त हुन्छन् तर मिठो माया गरेर गाली गर्ने कोही हुँदैनन् । मायाको गीत गएर अरूलाई नचाउनेहरूको आफ्नै जीवन खल्लो हुन्छ ।
तर तपाईंले मेहेनत गरेर कमाएको नाम, दाम नै तपाई की पत्नी, तपाईंलाई माया गर्ने पति, आफन्त वा परिवारलाई जोड्न सकेन भने त्यो चाहिं विडम्वना नै हो । अथवा यश र सम्पत्तिका लागि नै पतिपत्नीको प्रेम, आमाबुवाको आशिर्वाद र साथीसंगीको “मिठोपन” छोडियो भने दोस्रो बिडम्वना हो । धनाढ्य हुँदैमा धेरैले चिनेको हुँदामा “आफन्त’ छोडेर स्वच्छन्दतातिर उन्मुख हुनु विडम्वनाको आरम्भ हो ।
यो त्यस्तो अवस्था हो जहाँ एउटा सेलिब्रेटी वा उसका “पति वा पत्नी”हरू धेरै मान्छेहरूसँग घेरिएर पनि एक्लो हुन्छ । धेरै मान पाएर पनि एकान्तमा अपमानित हुन्छ । घोर निराशामा रुल्मुलिएर पनि “फ्यानका” लागि भनेर मुसुक्क हाँस्छ । विचरो सेलिब्रेटी ! ठूलो घर हुन्छ तर गृहस्थी हुँदैन, ठूलो मान हुन्छ तर मर्यादा हुँदैन, सबैतिर चाहने हुन्छन् तर ती मध्ये एउटा पनि “मन” बुझ्ने हुँदैन । न बिवाहको टुङ्गो हुन्छ न त पारचुकेको नै ।
एउटा कमसल “सेलिब्रेटी”ले आफ्नो चारैतिर अरूको लागि प्रकाश र प्रेरणा तर आफु र आफ्नै पतिपत्नी, आफन्तहरूका लागि काँडाहरू फलाएको हुन्छ । थोरै मात्र सेलिब्रेटी भाग्यमानी हुन्छन्: जसले आफ्नै प्यारी पत्नी, आफ्नो प्रिय पति वा आफन्तका लागि पनि मायाका फूलहरू आजीवन बिच्छ्याउँन् सफल हुन्छ ।
कहीं सेलेब्रेटीको अहंकारका कारण उनका पति/पत्नी पिडित छन् भने कहीं पति/पत्नीको अज्ञानले आपसमा पिडित छन् । त्यसपछि उनीहरूसँग एउटा मात्र काम रहन्छ: एकअर्कालाई दोष दिने, आफ्नो कमजोरी अर्कोमा थुपारेर आत्मरति गर्ने ! बरू दोष दिन खर्चिने समय “पार्टनर”को असलपना खोज्न लगाएको भए सेलेब्रेटीपनमा सुगन्ध भरिने थियो ।
समस्याहरू सबैका घरमा हुन्छन् । सबैका एकनासे समस्या हुँदैनन् । परिवारलाई समय दिन नसक्ने चिकित्सकले हप्तामा एकदिन भए पनि पतिपत्नी, छोराछोरी, आमावुवाको लागि समय निकाल्नु पर्‍यो । यो उनीहरूको लागि जतिधेरै आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी तपाईंका लागि आवश्यक छ । बाबुआमाको प्रेम\_पूर्ण बोली, पत्नी/पतिको मीठो सिकायत, छोराछोरीको न्यानो स्पर्शमा तपाईंले कमाएको लाखौंलाख रुपैयाको भन्दा बढी मूल्य हुन्छ । यस्तो मूल्य बुझ्न तपाईं नै परिवारसँग हुनुपर्छ ।
परिवारले पनि बुझ्नुपर्छ “सेलिब्रेटी” हुनु सजिलो काम होइन । एउटा सेलिब्रेटीले समाज तथा राष्ट्रका लागि धेरै थोक बलिदान गर्न बाध्य हुन्छ । उसको व्यक्तिगत जीवन हुँदैन । न उसले सुख भन्न पाउँछ, न दुख । उसले केवल अर्काको लागि खट्नुपर्छ । उसले आफन्तको प्रेम, परिवारको माया यहाँसम्म कि निजीपन पनि समाजका लागि सुम्पिएको हुन्छ । यो सबै थोकमा उसको इच्छा नहुन सक्छ । उसले आफ्नो जीवनलाई “सामाजिक-पुतली” बनाउनु पर्छ । उसको नियति नै एस्तो हुन्छ ।
जब हामीले “अरू ले के गर्यो र के दियो’ तिर बढी ध्यान हुन्छ र ‘मैले के गरें र दिएँ’ भन्नेमा वास्ता हुँदैन अनि, पारिवारिक समस्याहरू आरम्भ हुन्छन् । यस्ता समस्याहरू देखा पर्दा साथ सम्बोधनको वातावारण तय गर्नुपर्छ । सेलिब्रेटीहरूको हकमा “आइस-ब्रेक’ गर्ने काम तिनकै हुन्छ । किनभने निजले परिवारमा अन्यका तुलनामा बढी महत्व पाएको हुन्छ । यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ भोजनको टेबल नै हो ।
समस्या त समस्या नै हो । तर समस्याको उत्थान गर्दा सकारात्मक तवरले उठान गरिएको छ भने समापन पनि सकारात्मक रूपमै हुन्छ । नकारात्मक रूपमा अर्थात् कसैलाई ब्लेम गर्दै समस्याको उठान गर्दा समस्या अझैं बल्झिने हुन्छन् । सानो बोली, मीठो सम्बोधन, मबाट कुराको उठान र सद्भावको याचना – यी कुराले सकारात्मक संदेश जान्छ । वस, बोल्ने वा पहल गर्ने मान्छेले कुनै हालतमा पनि आफ्नो होस् गुमाउनु हुन् हुँदैन । वेहोसी नै सबै समस्याको जड हो ।
सेलिब्रेटीको कामको प्रकृतिअनुसार समस्या पनि फरक-फरक हुन्छन् । तर समस्याहरू मध्ये सबैभन्दा गम्भीर चाहिं “परपुरुष वा परस्त्री”संग लागेको छ भन्ने आरोप हुन्छ । नेपाली समाजको सांस्कृतिक बनावटअनुसार यस्ता आरोपहरू निकै दुखदायी, पीडादायी हुन्छन् । केही आरोपहरू सत्य हुन्छन् भने केही आरोपहरू शंकाका आधारमा मोटाएका हुन्छन् । तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि अनैतिक सम्बन्ध सजिलो हुँदैनन् । परिवार, समाज तथा आफ्नै व्यक्तित्वलाई नाश गर्ने बाटोतिर नगएकै राम्रो । यो लेख पढ्नेले आइन्दा करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ ।
हरेक मान्छेले प्राकृतिक रूपमा भएको “भूल” स्वत: अग्रसरता लिएर स्विकार्छ र सुधार्छ । तर भूललाई “वहाना” बनाउनेहरूले सँधै गल्ती गरेको नाटक गर्छन् । उनीहरू आफुलाई सुधार्न नै चाहन्नन् । हामीले बुझ्नुपर्छ – तपाईंको गल्तिको मूल्य परिवारले चुकाउनु त पर्छ नै तपाईं स्वयं पनि एसबाट पिडित हुनुहुन्छ । लुतो कन्याएर खुसी प्राप्त हुँदैन न सुख नै पाइन्छ । आफैलाई ढाट्ने मानिस संसारको सबैभन्दा दुखी प्राणी हो ।
घृणाको ठाउँमा प्रेम, अविश्वासको ठाउँमा विश्वास, अहङ्कारको ठाउँमा स्वाभिमान, लाञ्छनाको ठाउँमा सम्मान, अभद्रताको ठाउँमा शालीनता, देखावटीपनका ठाउँमा यथार्थता, असत्यका ठाउँमा सत्य, असहयोगका ठाउँमा सहयोग, असहजताका ठाउँमा सहजता तथा नकरात्मकताका ठाउँमा सकारात्मकता भए “सेलिब्रेटी”को पारिवारिक जीवन पनि साच्चिकै “सेलिब्रेटी” नै हुने थियो । हरेक सेलेब्रेटीले एउटा तत्थ्य बलियोसँग मनमा राख्नुपर्छ “तपाईंको आफ्नो परिवार छ, त्यसलाई तपाईंको प्रेम, सरलता, सहजता र एउटा प्राकृतिक मान्छेको सधैं खाँचो छ र तपाईं स्वयंलाई पनि तेही खाँचो छ ।”
यदि तपाईं सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ भने बधाई छ । यस्तो महत्वपूर्ण स्थान सबैले प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अझै प्रगति होस् । तर हामी मान्छे भएकोले अनेकौं समस्या भोगिरहेका हुन्छौं । यदि तपाईंमा एक्लोपन, निराशा, डर, निद्रा नलाग्ने, कसैमा पनि विश्वास गर्न मन नलाग्ने, रीस उठिरहने, शंका लागिरहने, मेडिकल परीक्षणमा केही नदेखिने तर शरीर दुख्ने, पोल्ने, वाक्वाकी लागि रहने, पेट विग्री रहनेजस्ता समस्या छन् भने चूप लागेर नवस्नुहोस् । हामी तपाईंको कुरा सुन्न, तपाईंलाई सहयोग गर्न सधैं तयार छौँ । निर्धक्कसँग आफ्नो कुरा राख्नुहोस् । तपाईं र हामी मिलेर एउटा रमाइलो जीवनको बाटो पहिल्याउने छौँ ।
लेखक डा. गोविन्दशरण उपाध्याय मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हुन्।
Tagsकलाकार पीडा सेलिब्रेटी